Le migaqo yeNkonzo ibandakanya isivumelwano sonke phakathi kwakho neNATVISA.COM kwaye ilawula ukusetyenziswa kwakho kwale Nkonzo. Ukuba uyaqhubeka nokukhangela kunye nokusebenzisa le webhusayithi, uyavuma 'ukuthobela kwaye ubotshelelwe yile mibandela ilandelayo yokusetyenziswa, kunye nomgaqo-nkqubo wethu wabucala olawula ubudlelwane be-NATVISA.COM' kunye nawe ngokunxulumene nale webhusayithi. Ukuba awuvumelani nelinye icandelo lale miqathango, nceda ungasebenzisi iwebhusayithi yethu. Igama '' NATVISA.COM 'okanye' thina 'okanye' thina 'libhekisa kumnini wewebhusayithi. Igama elithi 'wena' libhekisa kubasebenzisi okanye ababukeli bewebhusayithi yethu.
Iimfuneko zeVisa kuyo nayiphi na i-visa zisekwe nguRhulumente welizwe kwaye ziya kutshintsha ngaphandle kwesaziso. Ngelixa i-NATVISA.COM isenza umzamo wayo wokubonelela ngolwazi olupheleleyo nolwangoku, asinakuqinisekisa ukuba ulwazi olunikiweyo lolona lugqibeleleyo nolwangoku. I-NATVISA.COM ayiyo kwaye ayiyi kuba luxanduva lolwazi olo. I-NATVISA.COM ayinaxanduva ngezenzo okanye ukungasebenzi kwalo naliphi na ilizwe amagosa kaRhulumente nabasebenzi. Ukuqhubekeka kwamaxesha e-visa kugqitywa kuthi njengendawo esisiseko kumava ethu kwiiwebhusayithi zikaRhulumente. I-NATVISA.COM ayiyo kwaye ayiyi kuba noxanduva lwamaxesha okusebenza.
I-NATVISA.COM ayinakuba noxanduva lwazo naziphi na iindleko, ukonakala, kunye neenkcitho kuyo nayiphi na impazamo okanye unobangela, nokuba kubandakanya kodwa kungaphelelanga kuxanduva lokutshintsha kuhambo, ukuphazamiseka kokuhamba, okanye ukuthintela okanye ukunqunyulwa kokuhamba kunye neendleko ezibangelwa iindleko. loo monakalo, iindleko okanye iindleko zinokwenzeka, zichazwe ngokuthe ngqo, zibalulekile, ziyimizekelo, okanye kungenjalo, kwaye kubandakanya kodwa kungaphelelanga ekulahlekelweni yenzuzo okanye ingeniso, ngaphezulu kwemali yokuhlawula inkonzo ehlawulwa ngumthengi ukulungiselela ukwenziwa kwe-visa, nokuba zinjani na iimeko, Nokuba ngaba i-NATVISA.COM yayinolwazi lokuba loo monakalo kungenzeka ukuba yenzeke nokuba i-NATVISA.COM inokuba, okanye inokuba noxanduva, elinobangela. I-NATVISA.COM yenza iinzame zayo ezilungileyo zokuhlangabezana namaxesha okuhambisa kodwa i-NATVISA.COM ayiqinisekisi ngalo naliphi na ixesha lokuhanjiswa.
I-NATVISA.COM ayiyi kuba noxanduva lwalo naliphi na inani lokulibaziseka okanye ilahleko ebangelwe yimicimbi esingakwaziyo okanye esingayilawuliyo, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwimeko yemozulu, isenzo sikaThixo, imfazwe, iintshaba zikawonke-wonke, ukhuphiswano lwaseburhulumenteni, ugwayimbo, okanye iintshukumo okanye ukungenzi kweziphathamandla zikarhulumente (kubandakanya ukulibaziseka okanye ukuphuma kwewebhusayithi kukaRhulumente).
Onke amatikiti angabuyiswayo okanye ukubhuka akufuneki kuthengwe kude kube iVisa ikhuselekile kwaye ikuwe.
Umxholo wamaphepha ale webhusayithi lolwazi lwakho ngokubanzi kunye nokusetyenziswa kuphela. Ingaphantsi kokutshintsha ngaphandle kwesaziso. Umxholo kunye nekhonkco ziimbono zomntu wesithathu hayi ze-NATVISA.COM. Asinaxanduva lwalo naluphi na umxholo wesithathu.
Asazi ukuba thina okanye abanye abantu besithathu sinike nayiphi na iwaranti okanye isiqinisekiso malunga nokuchaneka, ixesha elifanelekileyo, ukusebenza, ukugqibelela okanye ukulunga kolwazi kunye nezixhobo ezifunyenwe okanye ezinikezwe kule webhusayithi ngayo nayiphi na injongo ethile. Uyayamkela into yokuba olo lwazi kunye nezixhobo zinokuqulatha ukungachaneki okanye iimpazamo kwaye ngokucacileyo asibeki luxanduva lwayo nayiphi na into engachanekanga okanye iimpazamo ukuya kuthi ngokupheleleyo zivunyelwe ngumthetho. Asinxibelelananga okanye sidibene naye nawuphi na urhulumente welizwe.
I-NATVISA.COM ayiyi kuthwala uxanduva okanye uxanduva lwaye nawuphi na umntu wesithathu okanye ophakathi. Imirhumo enxulumene nokulungiswa kwe-visa ingatshintshwa ngaphandle kwesaziso esingaphaya. Xa ungenisa ifom yesicelo kwi-intanethi, umfaki-sicelo unoxanduva lokuqinisekisa ukuba ulwazi olukwifom luchanekile kwaye yonke inkcukacha zonxibelelwano zibandakanya ulwazi lomhambi kunye nolwazi lwencwadana yokundwendwela ichanekile. Xa ukugqitywa kugqityiwe obhalisiweyo waziswa nge-imeyile.
Ukusebenzisa kwakho nayiphi na ingcaciso okanye izinto ezikule website kungumngcipheko wakho, apho asiyi kuba noxanduva. Kuya kuba yimbopheleleko yakho ukuqinisekisa ukuba nayiphi na imveliso, iinkonzo okanye iinkcukacha ezifumaneka kule website zidibana neemfuno zakho.
Le webhusayithi iqulathe izinto esinazo okanye ezinelayisensi kuthi. Lo mbhalo ubandakanya, kodwa ungaphelelanga apho, uyilo, ulwakhiwo, imbonakalo, imbonakalo kunye nemizobo. Ukuveliswa kwakhona akuvumelekanga ngaphandle kokuhambelana nesaziso se-copyright, esiyinxalenye yale migomo kunye neemeko. Zonke iimpawu zentengiso eziveliswe kule webhusayithi, ezingezizo iipropathi, okanye ezinelayisensi yomqhubi, ziyavunywa kwiwebhusayithi.
Ukusetyenziswa okungagunyaziswanga kwale webhusayithi kunokubangela ibango lomonakalo kunye / okanye ityala lolwaphulo-mthetho. Le webhusayithi inokubandakanya amakhonkco kwezinye iiwebhusayithi. Ezi makhonkco zinikezelwa ukulungiselela wena ukubonelela ngakumbi ngolwazi. Abachazi ukuba siyayivuma iwebhusayithi (s). Asinaxanduva kumxholo wewebhusayithi (ii) yonxibelelwano. Ukusetyenziswa kwale webhusayithi kunye nayo nayiphi na imbambano evela ekusetyenzisweni kwewebhusayithi kuxhomekeke kwimithetho yelizwe ngalinye elilawulayo.
I-NATVISA.COM inelungelo lokuguqula okanye ukulahla, okwethutyana okanye ngokusisigxina, inkonzo (okanye nayiphi na inxenye yayo) okanye ngaphandle kwesaziso. Uyavuma ukuba i-NATVISA.COM ayinakubekwa tyala kuwe okanye kulo naliphi na iqela lesithathu ngalo naluphi na utshintsho, ukumiswa okanye ukunqunyanyiswa kwenkonzo.
Ukusetyenziswa kwenkonzo kusengozini yakho. Inkonzo ibonelelwa ngo "njengoko kunjalo" kwaye "njengokufumaneka" kwesiseko. I-NATVISA.COM ibhenca ngokucacileyo zonke iiwaranti zalo naluphi na uhlobo, nokuba kuyacaca, kucetyisiwe okanye kusemthethweni, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga kwimvumelwano ebekiweyo yokurhweba, ukulungela injongo ethile, isihloko kunye nokwaphula umthetho.
I-NATVISA.COM ayenzi siqinisekiso sokuba (i) inkonzo izakuhlangabezana neemfuno zakho, (ii) inkonzo ayizukuphazamiseka, ixesha, ukhuseleko, okanye ngaphandle kwempazamo, (iii) iziphumo ezinokufumaneka ngokusetyenziswa kweNkonzo. iya kuba ichanekile okanye ithembekile, okanye (iv) umgangatho wazo naziphi na iimveliso, iinkonzo, ulwazi, okanye ezinye izinto ezithengiweyo okanye ezifunyenwe nguwe ngeNkonzo ziya kufezekisa ulindelo lwakho.
Uqonda ngokucacileyo kwaye uyavuma ukuba i-NATVISA.COM ayinakubekwa tyala ngayo nayiphi na into engathanga ngqo, eyenzekileyo, ekhethekileyo, isiphumo, umonakalo ongumzekelo, okanye ukonakala kwelahleko yenzuzo kubandakanya kodwa kungaphelelanga apho, kumonakalo wokuphulukana nenkoliseko, ukusetyenziswa, idatha okanye ezinye izinto ezingaphathekiyo ilahleko (nokuba i-NATVISA.COM icetyisiwe malunga nokwenzeka komonakalo), nokuba kusekwe kwisivumelwano, ukuhlukunyezwa, ukungahoywa, uxanduva olungqongqo okanye kungenjalo, okubangelwa: (i) ukusetyenziswa okanye ukungakwazi ukusebenzisa inkonzo; (ii) indleko zokuthengwa kwempahla yokungena endaweni yeenkonzo kunye neenkonzo ezivela kuyo nayiphi na impahla, idatha, ulwazi okanye iinkonzo ezithengiweyo okanye ezifunyenweyo okanye imiyalezo efunyenweyo okanye iitransekshini ekungenwe kuyo okanye kwiNkonzo; (iii) ukufikelela okungagunyaziswanga okanye ukutshintsha kwezinto othumelo okanye idatha; (iv) iingxelo okanye ukusebenza kwawo nawuphi na umntu wesithathu kule Nkonzo; okanye (v) nawuphi na omnye umcimbi onxulumene neNkonzo. Akukho kwanto eya kuthi i-NATVISA.COM iphelele kuxanduva lwakho kuwo wonke umonakalo, ilahleko okanye oonobangela bezenzo ngaphezulu kweedola ezilikhulu elinamashumi amahlanu ($ 150).
Eminye imida ayikuvumeli ukukhutshelwa ngaphandle kwemida ethile okanye umda okanye ukubekwa ecaleni koxanduva lokonakala okanye komonakalo. Ngokuhambelana, eminye yale miqobo ingentla ebekiweyo ngasentla ayinakusebenza kuwe. Ukuba awonelisekanga yinxalenye yenkonzo okanye unemigaqo yenkonzo, ekuphela kwento oyenzileyo kunye nonyango olulodwa kukuyeka ukusetyenziswa kwale Nkonzo.
Ukubekwa ityala kunye nokukhululwa
Uyavuma ukukhulula, ukukhusela nokubamba i-NATVISA.COM kunye nababambisene nayo kunye namagosa abo, abasebenzi, abalawuli kunye nearhente engenabungozi kuye nakuphi na ukulahleka, ukonakala, iindleko, kubandakanya imirhumo yamagqwetha afanelekileyo, amalungelo, amabango, amanyathelo alo naluphi na uhlobo kunye nokwenzakala (kubandakanya nokufa) okuvela okanye okunxulumene nokusebenzisa kwakho inkonzo, nawuphi na umxholo womsebenzisi, unxibelelwano lwakho neNkonzo, ukophula kwakho le migaqo yenkonzo okanye ukwaphulwa kwakho nawaphi na amalungelo kwelinye. Ukuba ungumhlali waseCalifornia, uyayirhola i-Code Civil yaseCalifornia iCandelo le-1542. Ukuba ungumhlali welinye igunya, uhambisa nawuphi na umthetho okanye imfundiso enokuthelekiswa.
Ukuba uthenge iinkonzo zethu, kwaye emva koko uthatha isigqibo sokungahambi uye kwilizwe ekuya kulo okanye unyanzelwe ukuba urhoxise uhambo lwakho, asizokwazi ukubuyisa kwakhona. Ngokuthumela isicelo samkela le miqathango ingasentla kunye neemeko kunye nomgaqo-nkqubo wabucala. Uyayamkela into yokuba thina asinatyala kuRhulumente welizwe nasiphi na isenzo senkampani yesithathu ezisa iinkonzo.